Kuthiwani ukuba kukho inhlebo kwiqela?
Kukho abantu abangasondli isinkwa, kuphela banike ithuba lokuxoxa ngobomi babanye. Ngelishwa, phantse yonke into ehlanganisiweyo kukho umntu onjalo. Uninzi ngokuqhelekileyo le ntombi, nangona inhlebo ingaba yindoda. Kodwa nawuphi na ubulili lo mntu, umbuzo uhlala uhlala khona: wenzeni na kwaye unokuzikhusela njani kwiingxoxo rhoqo?
Ukuze ukhusele iimfihlo zabo, kungcono ukuba ungabaluleli bonke. Ewe, ngamanye amaxesha ufuna ukwabelana ngolonwabo okanye iingxaki zakho, kodwa ukuba uyazi ukuba kukho inhlebo kwiqela, kungcono ukuba ungenzi. Ngaphandle kokuba uthetha nomnye wabahlobo bakho-osebenza nabo, musa ukulibala ukuba ingxoxo yakho iya kuviwa okanye wakho umlingane uya kukhangela nje. Inkohliso inomnye umangalisayo, unokukwazi ukukwazi ukuzibonakalisa ngokwabo, apho bathetha ngento entsha baze bavelele yonke into abaqeshwa babo baxoxa ngayo. Abantu bayamangalisa indlela i-gossips ikwaziswa ngazo zonke izinto. Kukho ukucinga ukuba banamacandelo e-eversdropping nge-ofisi. Nangona kunjalo, akunjalo neze. Ngokulula, umntu ngamnye uzimisela iinjongo ezithile kwaye uya kubo. Iinjongo eziphambili zokufumana iinjongo kukufumana ulwazi olubanzi, ukuze kamva kuxoxwe nabanye abantu. Ngoko ke, oomama balo hlobo lengqondo benze konke ukugcina zonke izinto eziqhutyelwe kuzo. Ukusuka kwingxowa, akunakwenzeka ukufihla into ethile. Uhlala ebona yonke into, kwaye xa engayifumani, ucinga kwaye uyinike ngokuqinisekileyo okunokuba kuya kuba nzima ukuba abantu bangathandabuzeki. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuthetha ngemicimbi yakho, xubusha nabo kuphela abangaboni kakuhle kwaye bangenzi eofisini, kodwa endaweni ethile kwindawo engathathi hlangothi apho iindlebe zeengxoxo zingakufikeli.
Ungafihla ukucaphuka kwakho.
Abantu abaninzi benza impazamo enkulu - abaxeleli abahlebi ukuba abanakuvuyela ukuziphatha kwabo. Into yokuba abafazi abanjalo bahlala bengaqapheli ukuba baziphatha ngokungavumelekanga. Kungokwemvelo ukuba baxoxe nabanye njengoko bephefumula. Ngoko ke, ukusasaza inhlebo elandelayo, aba bafazi abacingi ukuba bacaphukisa indlela abaziphatha ngayo abanye, baphanga ubomi babo kunye nokunye. Ngoko ke, ukuba iqela lakho lingenakuvuyela ngokuziphatha kakubi, kuyafaneleka ukuthetha naye. Yenza konke oku kunye, ukuze loo ntokazi ingacingi, njengokunganeliseki ngokuziphatha kwayo yombono womntu oyedwa kuphela. Ngoko ke, ukuba ugqiba ukucima ukuhleka, hlawulela onke amaqela aye kuye ukuba athethe. Yilungiselele ukuba inkohlakalo ayayiqondi into engxaki. Ngokuqinisekileyo akayi kubona into ephosakeleyo kwizenzo zakhe. Ngoko ke, kuya kufuneka uchaze kuye ixesha elide kwaye uchaze intsingiselo yenkinga. Ngendlela, kuyacetyiswa ukuba ungahambi ukukhala kunye nokuhlambalaza. Khumbula ukuba awudingi ukucaphukisa ukuhleka, kodwa uchaza ukuba ukuziphatha kwakhe akuvumelekanga. Ukuba uhamba ukukhala kunye nosongelo, kwenzeka ukuba le ntokazi iya kuthukuthela. Yaye ukuba intombazana inomsindo iyakucasula kwabasebenzi bayo, ngoko bonke abantu bangabandezeleka. Uye walahlekisa ubungqina kuwo wonke umntu kwaye ukuba unqwenela ukuba angonakalisa ubudlelwane kunye nabanye abantu. Musa ukuzitya okanye uhlawule ngemali enye. Mxubane naye malunga nento yokuba wonke umntu akanakonwaba xa ubomi bakhe bomntu buxubusha ngaso rhoqo. Ngoko ke, abasebenzi bacela ukuba bangabi nentshisekelo kwezobudlelwane babo, iingxaki kunye namaqhinga ngokunyanisekileyo. Bona ngokwabo bafuna ukuqonda imeko zabo, kwaye ukuba bafuna uncedo, baya kuphendukela kuyo. Ngokuqinisekileyo, ukunyundela kunzima ukuyiqonda ngokusemgangathweni, oko kuxoxwa ngako, kodwa ukuba umntu osasaza iindlebe, ngumntu olungileyo kwaye akayiqondi into endiyenzayo, uya kuphulaphula izicelo zabanye kwaye ubuncinane uzame ukwenza njalo .
Ngelishwa, kukho iziganeko ezinokuthi iingxoxo azibani na iziphumo. Bavakalelwa nje ngokuba baziphathe ngendlela efanayo ukubiza indlela abaziphatha ngayo, abaya kuthi. Kule meko, ungasebenzisa isixhobo esiyaziyo esikolweni-ukutshatyalaliswa. Abaninzi banokuyifumana ingumntwana, kodwa ke, i-boycotts yenza into yokunyundela. Into yokuba abantu abanjalo bafuna ukunxibelelana rhoqo. Kufuneka baxelele umntu into, ngaphandle koko baqala ukusa. Kwaye ukuba abantu abangawuphulaphuli baliphulaphule kwaye bakhulume nayo, ke le ndlela yokuziphatha yowesifazane wesalathisi yintlungu. Ababanomdla wokuza emsebenzini, kuba abafunayo apho. Ukuthula kunye nokungahoywa ngokupheleleyo komntu onjalo kuya kuba yinto efanelekileyo. Soloko ulungele ukuhleka ukuzama ukuphuma ukuthetha. Simele sihluthe iqela elipheleleyo kwaye singalokothi sijonge oko bathethayo. Uya kuvuma kunye nabasebenzi ukuba xa umntu eva into enamathela kuye, kungcono ukuba ufike kumntu ngokwakhe malunga neentlobo ezibuhlungu kwaye umbuze malunga nale meko. Kukho nawuphi na umcimbi awuvumeli uqhagamshelwano lomntu ongenalo igama. Ukuba ubuncinane omnye umntu unika ukulahla, ukukhwabanisa akuyi kuphumelela, kuba inkohliso izakuva amandla ayo kwaye iya kufumana indlela engayenza ukuba wonke umntu athethe, kodwa aphinde axabane. Ngoko cwaka uze ungaphenduli amagama akhe. Ngokukhawuleza okanye kamva umntu onjalo akapheli. Omnye unokuyeka ukuhlanganisana nonke, umntu uzama ukuthetha ngomnye umntu, kwaye abanye bayayiqonda kwaye bayavume iimpazamo zabo. Kwimeko nayiphi na into, ukuba unako ukuhlala nokuhleba, i-emoyeni kwikomiti lakho iya kuphucula kakhulu.
Iingxobo ziyingxaki phantse ngalinye iqela. Abantu abanjalo baba yimbangela yokungquzulana phakathi koogxa, uvakalelo lwentlungu kwindawo yokusebenza kwaye ngokuqhelekileyo unobungozi obungendawo. Ngoko ke, ukuba ufumanisa ukuba kukho ukuhleka okanye ukuhleka kwiqela lakho, qiniseka ukwenza njalo nangayiphi indlela. Unokusebenzisa oku ngasentla okanye uze nento ethile. Into ephambili kukuba usebenze kunye neqela lonke kwaye ungavumeli imeko ngokwayo. Yiba nethemba, nangona ude uvumele inhlebo yenza oko, yintoni eyifunayo, ukugqithisa ubuhlobo bakho nabasebenzi kunye nomsebenzi.
Yintoni efunekayo eyenziwe ukutsala umthengi?
Iingcebiso zokufumana umsebenzi
Indlela yokudibanisa ukukhulelwa nokusebenza?
I-Typology yabasebenzi okanye ndisebenza kwindawo yezoo
Indlela yokusinda ekuxothweni nasekufumaneni umsebenzi omtsha
Isinyathelo esitsha senqanaba lomsebenzi
Isonka nge sinamoni
I-Physiotherapy yezifo ezivuthayo zamalungu omzimba wesini
Itanki lamaphepha ngezandla zakho
Thatha inxaxheba kumncintiswano ukusuka kwi-Isotoner uze wenze umbala ekwindla ngembala ekhanyayo!
I-Strawberry pie nge-vanilla
ULecho kunye namaqabunga kunye netamatato
Imizekelo yemisebenzi yabasetyhini abaqhelekileyo
Ikhekhe kunye nama-strawberries kunye ne-rhubarb
Indlela yokukhetha uhlobo lobuso olufanelekileyo?
Xa intombazana ingavunyelwe ukulala ngesondo
U-Xenia Borodina wathetha malunga nama-scandals kunye nentombi endala
I-zucchini ebhaka kunye namazambane